फिल्मका कुरा पचाउन पाचक नै चाहिन्छ | नेपालको सम्झना
Browse » Home » फिल्मी खबर » फिल्मका कुरा पचाउन पाचक नै चाहिन्छ
फिल्मका कुरा पचाउन पाचक नै चाहिन्छ
-जे आउँछ मज्जाले पचाउँछ। यो एउटा पाचकको व्यापारिक नारा हो, जुन नेपाली फिल्मलाई पनि लागु हुन्छ। अझ, त्यो पाचकले भन्दा नेपाली फिल्मले नै बढी पचाउँछ होला। हिन्दी फिल्मले पचाउन नसकेर परित्याग गरेका बासी 'खुराक'हरू नेपाली फिल्मले अझै पचाइरहेको छ।
जति बासी खुराक 'भोगचलन' गरे पनि नेपाली फिल्म बनाउनेहरूको पेट यति सफा छ कि, आफूलाई पच्यो भन्दैमा सबैले पचाउँछन् भन्ने भ्रम उनीहरूमा पैदा भएको छ। हिन्दीमात्र होइन हलिउडका समेत चानचुने फिल्मलाई पचाउन नसक्ने हैसियत नेपाली दर्शकको बनिसकेको उनीहरूलाई पत्तो छैन।
यस्तै हैसियत तपाई कोहीसित छ भने नेपाली फिल्मनिर्मातासँग ...मलाई त पचेन है' भन्दै गुनासो नपोख्नुस् नि। फेरि तपाईलाई फिल्मको टिकटसँग 'पाचक' भिडाइदेलान्। आखिर, विगतमा उनीहरूले 'पैसा खेर गएको सम्झेर रुने'हरूलाई आँसु पुछ्न रुमाल र 'फिल्मभन्दा गीतै राम्रो' भन्दै क्यासेट बाँडेकै हुन्।
टिकट काटिहाल्नुभो र हातमा पाचक परिहाल्यो भने फिर्ता नगर्नुस्। फिल्म नसकुन्जेल पाचकलाई साथमा राख्नुस् र तल उल्लेख गरिएका दृश्यहरू आउँदा चुस्न थाल्नुस्। जे आउँछ मज्जाले पचाउँछ।
दुर्घटना राजमार्गमा मात्र हुँदैन। नेपाली फिल्मको कलेजमा पनि हुन्छ। त्यहाँ हिरोहिरोइनले एकआपसमा ठक्कर खाइरहन्छन्। धेरै फिल्ममा यस्तो दुर्घटना भइसकेको छ। हिरोहिरोइन ठोक्किन्छन् र हिरो वा हिरोइनका किताब भुइँमा छरपस्टिन्छ। 'ओह सरी' भन्दै किताब टिप्ने काम हुन्छ। त्यतिबेला फेरि टाउको पनि ठोक्किनसक्छ।
२. हिरोहिरोइन टोलाइरहने
हिरोहिरोइन एकअर्कालाई देख्दा मुग्ध भएर टोलाउन थाल्छन्। दायाँबायाँ को-को छन् उनीहरूलाई मतलब हुँदैन। एकनाशले आँखा जुधाउँदै हराउँछन्। सँगैका साथीहरूले उनीहरूका आँखाअगाडि हत्केला हल्लाउँदा पनि 'ध्यान' भंग हुँदैन।
गाउँकी हिरोइन यति निर्धक्क हुन्छे कि नुहाउनलाई ऊ जंगलबीचको अप्ठ्यारो झरनामा पुग्छे। घरमै नुहाउन उसलाई मन लाग्दैन। किनभने त्यसो गर्दा उसको 'जवानी' प्रदर्शन हुँदैन। जसरी हुन्छ, सहरबाट आएको हिरोले देख्ने गरी उसलाई झरनामा गएर नुहाउनैपर्छ।
नेपाली फिल्मका 'सामन्ती'ले ऋण असुल गर्ने तरिका अनौठो छ। भाका नाधेपछि ऊ आफ्नो दलबलसहित ऋणीको घर पुग्छ र केटाहरूलाई भाँडाकुडा बाहिर फ्याँक्न हुकुम दिन्छ। ऋणीले त्यतिबेला निकै रोइकराइ गर्छ, खुट्टा ढोग्छ। तर, उसको मन पग्लिदैन। सायद यस्तो 'बिचल्ली'मा रमाउने आदत उसलाई लागिसकेको छ।
हिरो र भिलेनबीच भीषण लडाइँ हुन्छ। दुवै पक्षका थुप्रै पात्रको निधन हुन्छ। अन्तिममा हिरोले मुख्य भिलेनलाई मार्न लागेको बेला प्रहरी आइपुग्छ। भुइँमा लडेका 'भुसतिघ्रे'हरू र भिलेनलाई पत्रे्कर लैजान्छ। प्रहरीमाथि जनविश्वास घट्नुको कारण फिल्मको यही पाराले पनि हो कि!
0 comments to “फिल्मका कुरा पचाउन पाचक नै चाहिन्छ”